ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ရေစင်အောင် မဆေးဘဲစားရင် ဒီရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ရေစင်အောင် မဆေးဘဲစားရင် ဒီရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်
1. Staphylococcus (ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်း)
2. အသည်းရောင်အသားဝါ A
3. ကပ်ပါးပိုးတစ်မျိုးကြောင့် အူရောဂါဖြစ်ခြင်း (Cyclosporiasis)
4. Salmonella ဟုခေါ်သော ဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးကြောင့် အူရောင်ခြင်း
5. ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် အာရုံကြောအဆိပ်သင့်ခြင်း (Clostridium Botulinum)
7. Listeria (ပိုးဝင်ပြီး ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း)
8. Shigella ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ခြင်း
9. E.coli ပိုးဝင်ခြင်း ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းသွားခြင်း (ရေ၊ သွေး)၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း